ESI GBANWEE ỌRỤ ỌRỤ NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Gbanwee "Taskbar" na Windows 7
Dị ka a maara, e nwere ụdị okwu abụọ dị na teepu Excel: onye ikwu na zuru oke. N'okwu mbụ, njikọ ahụ gbanwere na ntụziaka nke ntụgharị site na ngbanwe nke ọnụ ọgụgụ, na nke abụọ, a na-edozi ya ma nọgide na-agbanweghi agbanwe mgbe ị na-edegharị ya. Ma na ndabara, adreesị niile na Excel bụ ndị zuru oke. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ka ị jiri nyocha zuru ezu (edozi). Ka anyị chọpụta otú a ga-esi mee nke a.
Jiri nyocha zuru oke
Anyị nwere ike ịnweta okwu zuru ezu, dịka ọmụmaatụ, na ikpe ahụ mgbe anyị debere usoro, otu akụkụ nke mejupụtara agbanwe a gosipụtara n'ọtụtụ nọmba, ma nke abụọ nwere uru mgbe nile. Nke a bụ, ọnụ ọgụgụ a na-arụ ọrụ dị ka ọnụọgụ mgbe nile, nke ịkwesịrị ịmepụta ọrụ ụfọdụ (ịba ụba, nkewa, wdg) na usoro dum nke nọmba agbanwe.
Na Excel, e nwere ụzọ abụọ ị ga - esi edozi okwu: site na ịmepụta ihe zuru ezu na iji ọrụ DFSS. Ka anyị leba anya na ụzọ nke ọ bụla n'ụzọ zuru ezu.
Usoro 1: nyocha zuru oke
N'ezie, ụzọ a kasị mara amara na ugboro ugboro iji mepụta okwu zuru ezu bụ iji njikọ zuru oke. Njikọ zuru oke dị iche abụghị naanị arụmọrụ, kamakwa syntax. Ihe adreesị ahụ nwere okwu mmechi a:
Maka adreesị edozi, a na-etinye akara dollar n'ihu ọnụahịa nhazi:
Enwere ike ịbanye aka na njirimara dollar. Iji mee nke a, debe cursor tupu ọnụọgụ mbụ nke nhazi adreesị (horizontally) nke dị na cell ma ọ bụ na ntụziaka usoro. Ọzọ, na nchịkọta keyboard nke keyboard, pịa igodo ahụ "4" uppercase (ya na isi ya Mgbanwe). Ọ bụ n'ebe ahụ ka dollar akara nọ. Mgbe ahụ, ịkwesịrị ime otu usoro ahụ na nhazi na nhazi.
E nwere ụzọ dị mfe karị. Ịkwesịrị ịdebe cursor na cell nke adreesị ahụ dị, wee pịa igodo F4. Mgbe nke ahụ gasịrị, akara dollar ahụ ga-apụta n'otu oge n'ihu nhazi ihu na nhazi nke adreesị.
Ugbu a, ka anyị leba anya n'otú esi ekwu okwu zuru oke na omume site na iji njikọ zuru oke.
Were otu okpokoro nke akwụ ụgwọ nke ndị ọrụ. A na-eme atụmatụ ọnụ site n'ịba ụba nke ụgwọ nke onwe ha site na nghazi ruru, nke bụ otu maka ndị ọrụ niile. Ọnụ ọgụgụ ya dị na sel dị iche iche nke mpempe akwụkwọ ahụ. Anyị na-eche ọrụ nke ịkọ ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ niile n'ụzọ kachasị mfe.
Ya mere, na cell mbụ nke kọlụm ahụ "Ụgwọ" anyị na-ewebata usoro maka ịbawanye ọnụego nke onye ọrụ kwekọrọ ya site na ọnụ ọgụgụ. N'okwu anyị, usoro a nwere ụdị ndị a:
Iji tọọ ihe mechara rụpụta, pịa Tinye na keyboard. E gosiputara ngụkọta ahụ n'ime cell nwere ụdị.
Anyị gbakọọ ụgwọ ụgwọ maka onye ọrụ mbụ. Ugbu a, anyị kwesịrị ime nke a maka mpaghara ndị ọzọ niile. N'ezie, a pụrụ idebe ọrụ ahụ na sel ọ bụla nke kọlụm ahụ. "Ụgwọ" iji aka, ịmepụta usoro yiri nke ahụ, gbanwee maka iwepụ, ma anyị nwere ọrụ ahụ, ngwa ngwa o kwere mee nyocha ahụ, na ntinye aka akwụkwọ ga-ewe oge buru ibu. Ee, na ihe kpatara itinye mgbalị na ntinye akwụkwọ, ma ọ bụrụ na usoro ahụ nwere ike ịpụtaghachi ya na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ?
Iji detuo usoro ahụ, jiri ngwá ọrụ dị ka akara njuputa. Anyị na-aghọ cursor na akuku aka nri nke cell ebe ọ dị. N'okwu a, ọ ghaghị ịkpụzi onye ọbụla n'onwe ya ka ọ bụrụ akara obe. Jidea bọtịnụ òké aka ekpe ma dọrọ ọkpụkpọ ahụ ruo na nsọtụ tebụl.
Mana, dịka anyị na-ahụ, kama ịkwụ ụgwọ ezé ziri ezi maka ndị ọrụ ndị ọzọ, anyị nwetara naanị zeros.
Anyị na-ele anya ihe kpatara nke a. Iji mee nke a, họta cell nke abụọ na kọlụm "Ụgwọ". Ogwe ntụ ọka ahụ gosipụtara okwu kwekọrọ na cell a. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ihe mbụ (C5) kwekọrọ na ọnụego nke onye ọrụ, onye ụgwọ anyị na-atụ anya ya. Mgbanwe nke nhazi na tụnyere cell gara aga bụ n'ihi ihe onwunwe nke relativity. Otú ọ dị, na nke a, anyị chọrọ ya. N'ihi nke a, ọnụego nke onye ọrụ anyị chọrọ bụ ihe mbụ. Ma ngbanwe nke nchịkọta mere na ọnụọgụ abụọ. Ma ugbu a adreesị ya anaghị ezo aka na ọnụọgụ (1,28), na sel efu n'ime ala.
Nke a bụ ihe kpatara ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ na-esote na listi ahụ gbanwere.
Iji dozie ọnọdụ ahụ, ọ dị anyị mkpa ịgbanwe nzaghachi nke ihe nke abụọ na-adabere na ya. Iji mee nke a, laghachi na cell mbụ na kọlụm. "Ụgwọ"site n'igosi ya. Ọzọ, anyị na-agagharị na nchịkọta usoro, ebe okwu anyị chọrọ ga-egosipụta. Họrọ ihe nke abuo na cursor (G3) ma pịa igodo ọrụ na keyboard.
Dị ka anyị na-ahụ, otu dollar gosiri na nhazi nke ihe nke abụọ, na nke a, dị ka anyị na-echeta, bụ àgwà nke ikwu okwu zuru oke. Iji gosi nsonaazụ, pịa igodo Tinye.
Ugbu a, dị ka ọ dị na mbu, anyị na-akpọ njedebe jupụtara site na ịtụkwasị cursor na akụkụ aka nri ala nke akụkụ nke kọlụm mbụ. "Ụgwọ". Jigide bọtịnụ aka ekpe ma dọpụ ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke a, a na-eme atụmatụ ngụkọta n'ụzọ ziri ezi na ọnụego ụgwọ maka ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ na-atụle n'ụzọ ziri ezi.
Lelee otú e si depụtaghachiri usoro ahụ. Iji mee nke a, họrọ nke abụọ nke kọlụm ahụ "Ụgwọ". Anyị na-ele anya okwu ahụ dị na ntụziaka usoro. Dị ka ị pụrụ ịhụ, nhazi nke ihe mbụ (C5), bụ nke ka dị na ya, gbanwere otu isi ala n'akụkụ oghere ma e jiri ya tụnyere cell mbụ. Ma ihe nke abuo ($ G $ 3), adreesị nke anyị mebere, nọgidere na-agbanweghi agbanwe.
Excel na-ejikwa okwu ahụ a na-akpọ agwakọta agwakọta. N'okwu a, adreesị nke mmewere na-edozi ma ọ bụ kọlụm ma ọ bụ n'usoro. A na-eme nke a n'ụzọ dị otú ahụ na-egosi dollar dollar naanị n'ihu otu n'ime nhazi nke adreesị. Nke a bụ ihe atụ nke njikọ njikọ ejikọta:
= A $ 1
A na-ewerekwa adreesị a dị ka ihe agwakọtara:
= $ A1
Nke ahụ bụ, ọ bụ naanị otu n'ime njikọta nke abụọ ahụ ka a na-ekwu okwu zuru ezu na mkparịta ụka agwakọta.
Ka anyị hụ otú a ga-esi tinye njikọ a jikọtara ọnụ na-eji ihe atụ nke otu tebụl ụgwọ maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na mbụ anyị mere ya ka nchịkọta niile nke ihe nke abuo bụ ịza okwu zuru ezu. Ma, ka anyị hụ ma ọ bụrụ na nke a, ọ ga-abụrịrị na a ghaghị ịkwado ụkpụrụ niile? Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe ị na-edegharị ya, nkwụsị ahụ na-apụta n'ụzọ dị nro, na nhazi nhazi na-agbanwe agbanwe. Ya mere, ọ ga-ekwe omume itinye ntụle zuru ezu naanị na nhazi nke akara, na nhazi nke kọlụm ahụ ka ọ bụrụ na ọ bụ na ndabara - onye ikwu.
Họrọ ihe mbụ na kọlụm. "Ụgwọ" na n'ime usoro ntụ ọka ahụ na-arụ ọrụ dị n'elu. Anyị na-enweta usoro ndị a:
= C4 * G $ 3
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-etinye okwu adreesị edozi na onye na-emepụta ihe nke abụọ nanị maka nhazi nke eriri ahụ. Iji gosipụta nsonaazụ na cell, pịa bọtịnụ ahụ. Tinye.
Mgbe nke ahụ gasị, jiri akara njuputa, detuo usoro a na ọtụtụ mkpụrụ ndụ n'okpuru. Dị ka ị na-ahụ, ụgwọ ọrụ maka ndị ọrụ niile rụrụ n'ụzọ ziri ezi.
Anyị na-ele anya otú etu esi egosipụta ya na cell nke abụọ nke kọlụm ahụ nke anyị mere iji mee ihe. Dika ị nwere ike ịhụ na nhazi usoro ahụ, mgbe ịhọrọ nke mmewere nke mpempe akwụkwọ, ọ bụ ezie na ihe nke abuo nwere njedebe zuru oke nke nhazi usoro, nchịkọta kọlụm adịghị agbanwe. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na anyị depụtaghachiri na ọ bụghị n'ezoghị ọnụ, ma n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na anyị ga-esite na nchịkọta, mgbe ahụ n'ọnọdụ yiri nke ahụ, anyị ga-eme nhazi okwu nke nhazi nke ogidi ahụ, maka usoro ahịrị usoro a ga-abụ nhọrọ.
Ihe Ọmụmụ: Ezigbo njikọ na Excel
Usoro 2: ọrụ nke FLOSS
Ụzọ nke abụọ iji hazie okwu zuru oke na teepu Excel bụ iji onye ọrụ ỤLỌ. Ọrụ a kapịrị ọnụ bụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ. "Njikọ na ngwa". Ọrụ ya bụ ịmepụta njikọta na cell ahụ a kapịrị ọnụ na mmepụta nke nsonaazụ ya na mmewere nke mpempe akwụkwọ nke onye ọrụ n'onwe ya nọ. N'okwu a, njikọ ahụ na-ejikọta na nhazi ahụ karịa ike mgbe ị na-eji akara dollar. Ya mere, a nabatara ya mgbe ụfọdụ iji kpọọ njikọta ỤLỌ "zuru oke". Nkwupụta a nwere okwu ntinye:
= FLOSS (jikọta cell; [a1])
Ọrụ ahụ nwere arụmụka abụọ, nke mbụ nwere ikike nke iwu, nke abụọ anaghịkwa eme ya.
Arụmụka Njikọ Cell bụ njikọ na otu ihe edemede nke Excel na ụdị ederede. Nke ahụ bụ, nke a bụ ihe jikọrọ ya, kama ejiri ya mee ihe. Nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme ka o kwe omume iji nye nkọwa zuru ezu.
Arụmụka "a1" - nhọrọ ma jiri ya mee ihe. Ojiji ya dị mkpa naanị mgbe onye ọrụ ahụ họọrọ nhọrọ nhọrọ ọzọ, kama iji usoro nhazi site na ụdị "A1" (ogidi ndị ahụ nwere aha akwụkwọ ozi, ma akara ahụ bụ nọmba). Nhọrọ ọzọ na-egosi iji ejiji "R1C1"na nke ogidi, dị ka ahịrị, na-egosi na ọnụ ọgụgụ. Gbanwee na ọnọdụ a ga-ekwe omume site na windo nhọrọ Excel. Mgbe ahụ, itinye onye ọrụ ahụ aka ỤLỌ, dị ka esemokwu "a1" kwesịrị igosi uru ahụ "ỤLỌ". Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ nkịtị nke igosipụta njikọ, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ, mgbe ahụ dịka arụmụka "a1" nwere ike ịkọwa uru "Eziokwu". Otú ọ dị, uru a dị na ndabara, n'ihi ya, esemokwu dị n'okwu a dị mfe karịa n'ozuzu a. "a1" ezughị.
Ka anyị lee otú okwu ga-esi rụọ ọrụ zuru oke, hazie ya na ọrụ ahụ ỤLỌ, site na ihe atụ nke okpokoro ụgwọ anyị.
Họrọ ihe mbụ na kọlụm. "Ụgwọ". Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "=". Dịka ị na-echeta, nke mbụ ị ga-ebuwanye ibu n'ime usoro akọwapụtapụtara maka ịkọ ụgwọ ga-anọchite anya adreesị ikwu. Ya mere, pịa mkpụrụ ndụ nke nwere ọnụahịa ụgwọ ọnụahịa (C4). Na-esote otú adreesị ya gosipụtara na ihe ahụ iji gosi nsonaazụ, pịa bọtịnụ ahụ mụbaa (*) na keyboard. Mgbe ahụ, anyị kwesịrị ịkwaga iji onye ọrụ ahụ ỤLỌ. Pịa na akara ngosi ahụ. "Tinye ọrụ".
Na window nke meghere Ndị isi ọrụ gaa na otu "Njikọ na ngwa". N'ime ndepụta ndepụta nke aha họrọ aha "DVSSYL". Wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Ihe arụmụka njikwa arụ ọrụ ọrụ ỤLỌ. O mejupụtara ubi abụọ na-edekọ na arụmụka nke ọrụ a.
Tinye onye ọbụla n'ọhịa Njikọ Cell. Naanị pịa na mmewere nke mpempe akwụkwọ ahụ, nke bụ ọnụọgụ nke ngụkọta ụgwọ (G3). Adreesị ahụ ga-apụta ozugbo na igbe arụmụka. Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ mgbe niile, mgbe ahụ, ịmebata adreesị ahụ nwere ike weere ya zuru oke, ma anyị na-eji ọrụ ahụ ỤLỌ. Dị ka anyị na-echeta, adreesị dị n'ime ya ga-adị n'ụdị ederede. Ya mere, anyị na-etinye ihe nhazi ahụ, nke dị na windo windo, na ntinye.
Ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ na ọnọdụ nhazi ihuenyo ahụ, ubi "A1" hapụ oghere. Pịa bọtịnụ "OK".
Ngwa ahụ na-eme ngụkọta ma na-egosiputa nsonaazụ na mpempe akwụkwọ nke nwere usoro.
Ugbu a anyị na-edepụta usoro a na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ nke kọlụm ahụ. "Ụgwọ" site na njuputa eju, dika anyi mere na mbu. Dị ka ị nwere ike ịhụ, a gbasiri ihe niile niile n'ụzọ ziri ezi.
Ka anyị hụ otú e si egosi usoro ahụ n'ime otu n'ime mkpụrụ ndụ ebe e depụtaghachiri ya. Họrọ ihe nke abụọ nke kọlụm ahụ ma lelee nkwụsị usoro ahụ. Dị ka ị nwere ike ịhụ, ihe mbụ, nke bụ njikọ gbasara ya, gbanwere nhazi ya. N'otu oge ahụ, arụmụka nke ihe nke abụọ, nke ọrụ a na-anọchi anya ya ỤLỌ, nọgidere na-agbanwe agbanwe. N'okwu a, a na-eji usoro nzazi edozi.
Ihe Ọmụmụ: DVSE ọrụ na Excel
A na-enwe ike ikwu okwu zuru ezu na akwụkwọ Excel na ụzọ abụọ: iji ọrụ FLESS na iji njikọ zuru oke. N'okwu a, ọrụ ahụ na-enye agbatị dịkwuo ike. A na-etinyekwa okwu zuru oke n'ụzọ zuru ezu mgbe ị na-eji njikọ ndị ejikọtara ọnụ.